Uhlamvu Lwemali Lweviki: Kusama (KSM) | Klever Ezezimali
"Njengomzala wasendle we-Polkadot," i-Kusama iyinkundla yokuhlola ye-blockchain eklanyelwe ukuhlinzeka onjiniyela ngohlaka olukhulu olungakala futhi olusebenzisanayo.
Yini i-Kusama (KSM)?
I-blockchain ye-Kusama yakhelwe phezu kwe-Substrate - inkundla ye-blockchain evela ku-Parity Technologies. I-codebase ye-Kusama icishe ifane naleyo ye-Polkadot - i-blockchain esebenzisanayo ephumelelayo.
Izinkampani ezisheshayo zingasebenzisa inethiwekhi ye-Kusama ene-shared, engakala kakhulu, esebenzisanayo, futhi ehlanganisa izici i-Polkadot engazisekeli okwamanje. Ngenxa yalokho, uKusama uzichaza “njengenethiwekhi ye-canary.”
Onjiniyela bangasebenzisa inkundla ukuhlola ukuqaliswa kwe-blockchain ngaphambi kokwethula iphrojekthi yabo yokugcina ku-Polkadot - nakuba amaphrojekthi amaningi ekhetha ukuhlala ne-Kusama ngomkhiqizo wawo wokugcina.
Ivamise ukusetshenziswa ekuqaleni kwesigaba sokuqala kanye nasekuhloleni ngenxa yomkhawulo wayo ophansi wokungena ekusetshenzisweni kwe-parachain kanye nezidingo zayo eziphansi zebhondi kubaqinisekisi.
Abasunguli be-Kusama: Bangobani?
Inkampani ebizwa nge-Parity Technologies yakhe i-Kusama ngethimba elifanayo elakhe i-Polkadot. UGavin Wood ungusosayensi wekhompyutha owaziwa emhlabeni wonke kanye nomqambi wezinhlelo owasungula i-Ethereum.
Abasebenzi abangaphezu kwe-100 basebenzela i-Parity Technologies, okuhlanganisa nonjiniyela be-blockchain abahamba phambili emhlabeni.
I-Kusama iphinde isekelwe izibonelelo ezivela ku-Web3 Foundation, inhlangano engenzi nzuzo eyasungulwa ukuze ikhuthaze isofthiwe yewebhu ehlukaniselwe amazwe kanye nobuchwepheshe obusekelayo nezinhlelo zokusebenza. Lesi sisekelo siphinde sisekele ucwaningo lukaKusama kanye nokuthuthukiswa komphakathi ngethimba lakhe elikhulayo.
Kusama: Yini Eyenza Ihluke?
I-Kusama ayifani namanye amapulatifomu e-blockchain ngoba yakhelwe ngokuyinhloko onjiniyela abafuna ukwethula amaphrojekthi anesibindi, afuna ukuvelela aneshejuli yentuthuko esheshayo.
Ngokusekelwe ku-multichain, idizayini ene-sharded heterogeneously, incike endleleni yokuvumelana yobufakazi besiteki, njengenye indlela yohlelo lokufakazela umsebenzi olunamandla (POW) olusetshenziswa amanye ama-blockchain amaningana.
Inethiwekhi ye-Kusama ingathuthukisa ngokushesha iketango ngaphandle kwemfoloko, futhi isekele ukudlula komlayezo we-cross-chain (XCMP) ukuze ixhumane namanye amaketango.
I-Kusama inikeza amandla okuphatha e-on-chain afana ne-Polkadot. Kokubili kuhlukaniswe futhi akunamvume, okuvumela noma ubani ongumnikazi wamathokheni e-Kusama (KSM) noma amathokheni e-parachain ukuthi avotele iziphakamiso zokuphatha, njengokuthuthukiswa kwephrothokholi, izicelo zesici, nokuthuthukiswa kokubeka. Ngenkathi yokuvota ehlanganisiwe kanye nesikhathi somthetho esiyizinsuku eziyi-15 nje kuphela, i-Kusama inikeza ukubusa okulandelanayo cishe ngokushesha okuphindwe kane kune-Polkadot.
Le phrojekthi yakhelwe ngendlela yokuthi amaphrojekthi akwazi ukwethula ngokushesha, aqalise ukuvuselelwa kanye nentuthuko ngaphandle kokuthi kusetshenziswe imfoloko - ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukubumbana komphakathi.
Ivikeleke Kanjani Inethiwekhi ye-Kusama?
Ubufakazi Obuqokiwe Besiteki (i-NPoS) yindlela yokuvumelana esetshenziswa i-Kusama.
Ukhetho lwezindawo zababambe iqhaza be-KSM lwenziwa ngenethiwekhi yabaqoki (abathintekayo be-KSM). Uma abaqokiwe babo bekhethwa ekuzungezweni okulandelayo, bazothola ingxenye encane yomvuzo wokwehla kwamandla emali. Uma umqinisekisi ephula izimfuneko zokusebenza noma enza ngokungathembeki, isitembu sabo singancishiswa.
Ngaphezu kwalokho, i-Kusama ixazulula ukuhwebelana kwe-cross-chain isebenzisa indlela elula yokubeka umugqa ngokusekelwe ezihlahleni ze-Merkle. Iziqinisekisi kumaketango odluliswayo zidlulisela imilayezo isuka kwelinye iketango iye kwelinye isebenzisa iziqinisekisi ezifanayo ochungechungeni ngalunye - le nqubo evikelekile, engathembeki isebenzisa iziqinisekisi ezifanayo kuchungechunge ngalunye.
Ungathenga kuphi i-Kusama (KSM)?
Hhayi-ke, lokho kusobala, Klever Wallet futhi uhwebe Klever Exchange.
Ibhalwe nguWarren Manuel
Landela njalo Twitter